‘कृषिमा धान मिसन’ | Bishow Nath Kharel
‘कृषिमा धान मिसन’
Posted on June 30, 2013 by bishownath
काठमाडौं, १३ असार- नेपालको मुख्यबालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् । प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनमा कमी आउँदा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कमी आएकाले विज्ञहरूले ‘धान मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा ११ प्रतिशतले कमी आउँदा चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३.६ प्रतिशतले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान छ । “सरकारले मकै र अन्य केही बालीमा ‘मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ,” धानविज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेतले भने, “मुख्य बाली धानको उत्पादनमा केन्द्रित रहेर ‘मिसन’ कार्यक्रम आवश्यक छ ।” देशमा मागअनुसारको चामल आपूर्तिका लागि धान उत्पादनमा वृद्धि गरी करोडौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट रोकिने उनले बताए ।
खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण रासायनिक मलको उपलब्धता र समयमा वर्षा नहुनुलाई मानिँदै आइएको छ । “उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून हुनु हो,” बस्नेतले भने, “तराईका कतिपय क्षेत्रमा सिफारिस नै नगरिएका भारतीय बीउको समेत प्रयोग देखिन्छ, यसको रोकथाम गर्र्नुपर्छ ।” कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले सरकारी बजेट उत्पादन केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताए । “पहिले आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ अनि मात्र निर्यात सम्भव छ,” उनले भने ।
सबैजसो बालीहरूको बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून भएकाले उत्पादनमा वृद्धि गर्न यसको दर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । “लक्ष्यअनुसार बीउ प्रतिस्थापन गर्नसके उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ,” प्रवक्ता डा. प्रभाकर पाठकले भने, “यसका लागि ‘सिड भिजन’ लागू गरिएको छ ।”
खाद्य सुरक्षाका लागि चालू आवदेखि कार्यक्रम थप गरेको र आगामी आवदेखि यसमा प्राथमिकता बढाइने उनले बताए । उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहने भए पनि सिँचाइ वृद्धि गर्न कृषि मन्त्रालयको एक्लो पहलले सम्भव नहुने पाठकको तर्क छ ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य असुरक्षा न्यून गर्नु प्रमुख चुनौती रहेकाले धानबाली उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “सुनसरी, मोरङ र भापाको मात्र क्षमताअनुसार उत्पादन हुनसके देशको मागलाई धान्न सक्ने देखिन्छ,” उनले भने, “उत्पादन वृद्धिमा कृषि र सिँचाइको भूमिका रहने भएकाले योजना तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।” कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि समेत मध्यनजर गरेर बजेट तयारी गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
दसौं रोपाइँ महोत्सव ब्रह्मायणीमा
सरकारले यो वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस भक्तपुरको ब्रह्मायनीमा मनाउने निर्णय गरेको छ । धान उत्पादक कृषकको मनोबल बढाउन १० वर्षदेखि बर्सेनि असार १५ गते विभिन्न स्थानमा रोपाइँ महोत्सव तथा धान दिवस मनाउने क्रममा यो वर्ष ब्रह्मायनीलाई छनोट गरिएको हो । धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली हो ।
यो वर्षको धान दिवसको नारा ‘धान उत्पादनमा वृद्धि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समृद्धि’ रहेको कृषि सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ कृषि सञ्चार अधिकृत वैकुण्ठ अधिकारीले बताए । रोपाइँ महोत्सव तथा धान दिवस मनाउन कृषि विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति र अन्य उपसमितिसमेत गठन गरेर तयारी थालिएको उनले बताए । सञ्चार केन्द्रले महोत्सवको प्रचारप्रसारको जिम्मा लिएको छ ।